ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဘာတွေလဲ? – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / သူတော်စင်များ / ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဘာတွေလဲ?
တစ်ဦးကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုသူတော်စင်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အကြွင်းအကျန်တစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါသည်, တစ်သူတော်စင်ပိုင်သို့မဟုတ်ထိမိကြောင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထု (သို့မဟုတ်ထိမိခဲ့သည်) ယရှေုသညျတစ်ခုသို့မဟုတ်သူတော်စင်များက.
အဆိုပါဘုရားကျောင်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းဘုရားသခငျ့ကျေးဇူးတော်တူရိယာဖြစ်ကြောင်းသွန်သင်, ကုသမှုနှင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်အရှင်သတင်းရင်းမြစ်. ရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှဆည်းကပ် Non-ကက်သလစ်ထူးဆန်းပုံရပေမည်နေစဉ်, ဒါဟာတကယ်တော့တစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သမ္မာကျမ်းစာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါဘုရားကျောင်းခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်အဖြစ်သန့်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများကို reveres (စိန့်ပေါလုရဲ့ကြည့်ရှု ကောရိန်သုပထမပေးစာ အခနျး 6:15 နှင့် 19), ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝစွန့်တော်မမူကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှုမြင်, ဒါပေမယ့် "ယိုယွင်းရန်၎င်း၏ကျွန်ခံရာမှ" ကရွေး (မိမိအကိုတွေ့မြင် ရောမအက္ခရာ, 8:21).
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏အသျှင်, ထိုမှတပါး, ယင်းကိုယ်ထင်ရှားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှရမှတ်ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်ကတိပြု (ကြည့်ရှု, နောက်တဖန်အ, ရောမဖို့ပေးစာ, 8:21).
ဤအပုပ်၏အထူးသဖြင့်မှန်: သူတို့အရှားပါးဖြစ်ရပ်, သိပ္ပံမှနားမလည်နိုင်လောက်အောင်, အရာအတွက်စိန့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးယိုယွင်းခုခံထားပါတယ်.1
အဆိုပါဘုရားကျောင်းကိုလည်းဘုရားသခင်အားသန့်ရှင်းစေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအဘို့သန့်ရှင်းယောက်ျားမိန်းမများ၏ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်လက်ခံရရှိစေခြင်းငှါသွန်သင်, နှင့်ဤအဘို့ခိုင်ခံ့သမ္မာကျမ်းစာထုံးတမ်းစဉ်လာလည်းမရှိ. ဥပမာအားဖြင့်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တောအရပ်မှတဆင့်သူတို့နှင့်အတူယောသပ်၏အရိုးတို့ကိုသယ်ဆောင် (ကြည့်ရှု ထှကျမွောကျရာ 13:19), နှင့်သူ၏အရိုးအကြာတွင်ရှေခင်မြို့မှာသန့်ရှင်းသောမြေ၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခဲ့သည် (ကြည့်ရှု ယောရှုသည် 24:32). ထဲမှာ ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာအုပ်, သူ့ခန္ဓာကိုယ်တမန်တော်မြတ်ဧလိရှဲ၏အရိုးတို့ကိုနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာသောအခါလူသေရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ် (13:21), နှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်, သူကနောက်မှဟေရုဒ်မင်းကြီးအားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုပြီးနောက်စိန့်နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၏နောက်လိုက်များကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အဘို့အလာ (ကြည့်ရှု မဿဲ 14:12).
ပြည်သူ့ယေရှုရဲ့အဝတ်ကိုအမြိတ်ကိုထိသဖြင့်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏ (မဿဲ 9:20-22, et al ။), စိန့်ပေတရု၏အရိပ်တို့က (ကို တမန်တော်၏တမန်တော် 5:15), နှင့်ပုဆိုးစိန့်ပေါလု၏ခန္ဓာကိုယ်မှဖိခဲ့ကြကြောင်း (တမန်တော်ဝတ္ထု, နောက်တဖန်အ, 19:11-12).
သမိုင်းစံချိန်ကနေ, ကျနော်တို့ကတစ်နှစ်ဝန်းကျင်သိရ 156 Smyrna အတွက်ခရစ်ယာန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်ပေးသွားတဲ့ဆရာတော်၏ char, အရိုးတို့ကိုစုရုံး, Polycarp, တမန်တော်ယောဟန်၏တပည့်ဖြစ်ခဲ့သော. သူတို့ကသူတို့ကစိန့်အရိုး "အဖိုးတန်ကျောက်များထက် ပို. တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်စဉ်းစားကြောင်းရေးသားခဲ့သည်များနှင့်ရွှေစင်ထက် ပို. အနု;"နှင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်များအတွက်အထူးအရပျ၌သူတို့ကို reserved (စိန့် Polycarp ၏အာဇာနည် 18:2-3). ဒီအလေ့အကျင့်ရှိသမျှတို့ကိုအစဉ်အဆက်သစ္စာရှိသောအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး.
အခြားသူများကိုမကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ကြည်ညိုလေးမြတ်နှင့်အတူအခက်အခဲရှိ. သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေ, သူ၏ကျေးဇူးတော်သိရှိစေရန်ရုပျပစ်စညျးမြားကို အသုံးပြု. ညျဘုရားသခငျ၏အတွေးရှင်းရှင်းအံ့ဩဖြစ်ပါသည်. ကက်သလစ်ဘာသာ, သော်လည်း, သခင်ယေရှု၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ, ယင်း၏တည်ထောင်သူ, တစ်ဦးလူ့ဇာတိဘာသာတရားဖြစ်ပါသည်, တနည်း, လူသည်ဘုရားသခင့: အပြည့်အဝ-ဘုရား, တိုင်းလမ်းပေမယ့်အပြစ်၌အပြည့်အဝ-လူ့.
အသိအမှတ်ပြုသည်လူတစ်ဦးကိုယ်ထည်အဖြစ်တစ်ဦးကိုဝိညာဉ်နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့, အသင်းတော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီး denigrate ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သက်တမ်းတိုးအတှကျဘုရားသခငျကထ (ပေါလုရဲ့ကြည့်ရှု ကောရိန်သုပထမပေးစာ, 6:19-20).
ရေ: ကြည့်ရှု ထှကျမွောကျရာ 30:17, ကို တောလည်ရာ၏စာအုပ် 8:6; ယောဟန်သည် 3:5, et al ။;
အသား: ကြည့်ရှု ကမ္ဘာဦးကျမ်း 4:4; ထှကျမွောကျရာ 12:8; ယောဟန်သည် 6:51-58;
သှေး: ကြည့်ရှု ထှကျမွောကျရာ 12:22 & 24:6; ကို ဝတ်ပြုရာကျမ်းစာအုပ် 14:4; မဿဲ 26:28; ယောဟန်သည် 6:53-56, et al ။;
မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကို: ကမ်ဘာဦးကတွေ့မြင် 14:18; ထှကျမွောကျရာ 12:15 & 20; မဿဲ 26:26, et al ။;
ဆီ: ကြည့်ရှု မာကု 6:13;
ရွှံ့: ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 9:6.
ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျ "ဟုအဆိုပါလူသေသညျဘုရားသခငျမဟုတျကွောငျးဆုံးမသွန်သင်, ဒါပေမယ့်လူနေမှု " (လုကာ 23:43). ဒါကြောင့်, ဘုရားသခင်နှင့်အတူခင်မင်မှုသေဆုံးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံမှာ "အိပ်ပျော်" မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူကိုယ်တော်နှင့်အတူအုပျစိုး. "အိပ်ပျော်" သေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်လျက်ရှိဖို့ဘုံသမ္မာကျမ်းစာကိုကိုးကား (ကြည့်ရှု မဿဲ 9:24) ရိုးရှင်းစွာသေမင်း၏ transience ဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူအထူးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာ ကွယ်လွန်သူ၏, မဝိညာဉျသ (ကြည့်ရှု မဿဲ 27:52). စိတ်ဝိညာဉ်၌ထာဝရသို့ဝင်သောနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးသည်အချိန်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဖြစ်နေဆဲ. ကက်သလစ်နောက်ဆုံးတရားစီရင်မှာယုံကြည်, ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြလိမ့်မည်. ↩